Jesosy avy any Nazareta, Ilay natao tsinontsinona
"Jesosy avy any Nazareta … nohosoran’Andriamanitra tamin’ny Fanahy Masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon’ny herin’ny devoly, satria Andriamanitra nomba Azy." Asan’ny Apostoly 10:37, 38
Niverina tany Nazareta i Josefa sy Maria, niaraka tamin’i Jesosy zaza, rehefa niala tany Egypta, izay nandosirany ny fanenjehan’i Heroda. Tao Jesosy no niaina ny fahazazany. Nankatò ny ray aman-dreniny Izy, ary “nitombo saina sy tena sady nandroso fitia tamin’Andriamanitra sy ny olona” (Lioka 2:51-52).
Hatramin’ny fahatelopolo taonany teo ho eo Jesosy dia nanao ny asan’ny mpandrafitra. Rehefa sabata dia tsy tapaka nankany amin’ny synagoga tao Nazareta Izy (Lioka 4:16). Tsy tsara laza teo amin’ny Jiosy ny tanànan’i Nazareta, porofon’izany ilay fanontaniana hoe: “Moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta?” (Jaona 1:46). Koa ny tanàna nahabe ny Mpamonjy dia antony nanaovana tsinontsinona Azy.
Taorianan’ny nanaovana batisa Azy tao Jordana, toy ny olona rehetra, dia feo avy tany an-danitra no nanononan’Andriamanitra Azy hoe: “Ity no Zanako malalako Izay sitrako” (Matio 3:17). Niverina tany Nazareta Jesosy ary nampianatra tao amin’ny synagoga. Talanjona ny olona rehetra noho ny tenin’ny fahasoavana naloaky ny vavany (Lioka 4:22). Saingy tsy nino izy ireo fa Jesosy no Ilay nirahina, tsy noraisiny ho Ilay Mesia Izy. Tao amin’io tanàna io indrindra, izay nahafantarana tsara ny Tompo Jesosy, dia efa natao tsinontsinona sy nailika Izy: “Nandroaka Azy hiala ao an-tanàna [izy rehetra]” (Lioka 4:29). Nokasaina hovonoina aza Izy, saingy lasa nandeha. Tanteraka tokoa ny faminanian’i Isaia hoe: “Natao tsinontsinona Izy ka tsy mba nahoantsika” (Isaia 53:3).
Nefa nitsangana tamin’ny maty Jesosy, rehefa avy niaina tam-panetrentena sy nitondra fahoriana, ary maty teo amin’ny hazofijaliana mba hamonjy olona mpanota. Velona mandrakizay Izy, ao amin’ny voninahitry ny lanitra.